बेनेलीले नेपालमा ल्यायो कार भन्दा पावरफुल इन्जिन भएको नयाँ मोटरसाइकल, कति पर्ला मूल्य ? - Araniko Times
नेपाली बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकल कम्पनी बेनेलीले नयाँ बर्षमा मोटरसाइकल पारखीको लागि नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । इन्ट्री लेवल कार भन्दा पावरफुल इन्जिन भएको नयाँ मोटरसाइकल ‘७५२ एस’को नेपालमा विक्री गरेको हो ।
१२ बर्षको उमेरमै यस्तो भयो,घर नहुदा छोरी मंदिरमा धुरुधुरु रुदै बसिन क्रिया,दुनिया रुवाउने ( हेर्नुस् भिडियो )
यशै मंदिरमा बाह्र बर्ष नाबालिका ऋतु बोहोरा जो आफ्नोे बाबाको नि`धन पश्चात् यहि मंदिरमा क्रिया बस्दै आएकि छिन् ।आज यनि क्रिया बसेको झन्डै नौ दिन भैसकेको छ ।आजको यश शृङ्खलामा हामी एकदमै दुखद भिडियो पस्कन बाध्य छौ कि केहि सहयोग मिल्ने अभिप्रायका साथ । ऋतुको परिवारको आफेनै घर नहुदा उनिहरु बिगत केही बर्ष देखि कोठा […]
प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ ‘मेरो छोरा बचाइदिनुस्’ भन्दै गएका बुवाआमाको जिवनमा भयो चमत्कार !
काठमाडौ । नेपालमा पहिलो पटक १ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ। यो चमत्कारीक काम त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सकहरुले गरेका हुन् । शनिवार राति ११ महिनाका एक जना शिशुमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको सर्जन प्राध्यापक डाक्टर रमेशसिंह भण्डारीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको यो […]
आगामी तीन महिनापछि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै विदेश उडान भर्न पाइने भएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजनाले भौतिक संरचना निर्माणको काम सकेकोले तीन महिनामा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भएपछि भैरहवाबाट सिधै विदेश उडान हुने भएको हो हो । करीब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जनाएको आयोजनाले अब प्राविधिक उपकरण जडानको काम मात्र बाँकी रहेको जनाएको […]